पहिलो दिनमा कति जनाले भरे युनियन लाइफको आइपीओ ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > पहिलो दिनमा कति जनाले भरे युनियन लाइफको आइपीओ ?
पहिलो दिनमा कति जनाले भरे युनियन लाइफको आइपीओ ?
पोष्ट गरिएको असार. २४, २०७८ मा ७:३० मध्यान्ह असार २४, २०७८
प्रकाशित : 6:05 pm, बिहीबार, असार २४, २०७८
काठमाडौं । युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ)मा पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ ।
विक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार बिहीबार (आज) ४ः३० बजेसम्म इन्स्योरेन्सको आइपीओमा ४ लाख ५० हजार २१४ जनाले ८० लाख ४३ हजार १०० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । यो मागभन्दा १.३८ गुणा बढी हो ।
कम्पनीले आजदेखि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ विक्रीमा ल्याएको छ ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीको
चाणक्य पोष्ट असार २४, २०७८
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्ः सर्वोच्चले असंवैधानिक काम गर्यो
युनियन लाइफको आइपीओमा पहिलो दिनमै ८२ करोड बढीको आवेदन, कतिले भरे ?